Somali | A Dirie
Maqaallo, Madadaalo. Maansooyin, Maahmaaho ama murti oo dhan.
Archives for posts with tag: Somali
Maanso gaaban: Qoomamo
Juunyo 26, 2013 //
Waxaan ahaa qof kali
Qoortiyo afartaydii waax
Dad baa iga qaybsadoo
Qoloba meel bay degtee.
Tilmaamayaal Adan, Dirie, galay, hees, jiifto, lyrics, Maanso, Poem, qiiq, Qoomamo, Somali, Somali culture, Somali poem, Soomaali, wuu
Juunyo 12, 2013 //
Maansadani waxay u qoran tahay sidii qaab sheeko. Akhrinteedana sidii sheekada ayaa loogu hagaagayaa!
Barihore waxaa jiray
Inan baaluqoo koray,
Bidhaantiisu waa taam
Garashana way u buuxdaa,
Tilmaamayaal Adan, badh, Baxsan, Dirie, galay, hadal, Heeso, iyana, joog, Maanso, Madadaalo, marba, murti, sheeko, Somali, Soomaali
Maarso 1, 2013 //
Marba waa si xilliyadu
Mar waa seef afwaynoo
Jidhka saafayso jari
Marna kuma saraayee
Rabi baa ku solansiin.
Tilmaamayaal Adan, Adan Dirie, Af-Soomaali, Dirie, Maanso, Said Salah, Somali, Sonali poetry, Wakhti, Xuska Maalinta Afka Hooyo 2012
Qaybtii 2aad: Jacayl Wehel Waayay
Janaayo 10, 2013 //
Jaqle markuu iskuulkii u soo dhamaaday ayuu soo baxay isagoo wali ka fekeraya inanta uu ka helay iyo wuxuu kala kulmi lahaa. Wuxuu dareemayaa inay baqdin ku sii badanayso markuu wakhtigii uu qabsaday inuu la hadlo gabadha soo dhawaadaba. Maalintaa Jaqle saaxiibadiisii uu horay u soo raaci jiray muu soo raacin ee wuu ka yara hadhay. Isagoo is boox booxaya oo kaligii ah ayuu wadadii ku soo dhacay. Markan Jaqle wuxuu naftiisa ku maaweelinayaa su’aalo ay ka midyihiin war ma waxan qof la odhan ayay ku dhahaysaa? Iyo Magaceeda oo kaliya yaad baranaysaa. Dheeho inta ka hartay qormadaan →
Tilmaamayaal Adan, Af-Soomaali, Dirie, Hiddo iyo dhaqan, jacayl wehel waayay, Jaqle, Khadra, Maanso, murti, sheeko, Somali
Maanso: Idaa aan aduunka joogee
Diseembar 28, 2012 //
Illa hadda waxyaabaha aan maskax dayda ka daadegin, dad kalena aan hubo inay ku taagan tahay waxaa weeye ninka Somaliga ah ee intuu bumbo isku soo xidho naftiisa ku waayaya si uu Somali kale u dilo. Waxaa ka sii daran nin ilmo yar oo iskuul da’aadii ah ku waayaya naftiisa si uu uga afqabto aduunka. Waliba waxaa ka sii daran, kan hibaysanaya ee ku faanaya dhawaacaa aan kasoo kabashadda lahayd ee uu dadkiisa u gaystay. Tollow muxuu dhihi lahaa kii yidhi “Cimrigaagoo dheeraaday, geel dhalayuu ku tusaa”, haddu tan u soo joogo. Maansaddan yari waxay kasocotaa ilmaha marna dagaalka lagu yahay marna loo isticmaalayo inta maskaxda laga bedesho.
Waxaan ahay awoodii
Intifaac sigii uuu
Anigaa u kacayoo
Una soo koraayee
Hayga dhiganin aarmiyo
Aallad lagu dagaalamo.
Tilmaamayaal Adan, Alshabaab, Dirie, hees, Idaa aan aduunka joogee, Ilmo, Maanso, Maanso yar, murti, nabad, Somali, Sonali poetry, yaab
Diseembar 8, 2012 //
Qiyaas ahaan maansadani waxay katimi wiil yar oo da’diisu markaa ku beegan tahay 9 jir, kana fakeraya bal sidii uu mar uun dhibkan uga bixi lahaa. Wuxuu u waramayaa saaxiibkii oo uu gartay inuu u jeesto. Waxay maansadani ku timid anoo mar aan saa uga durugsanayn youtube ka dhagaystay maansooyiinkii siinlayda iyo canug yar oo inkasta oo uu waalidkii ka maqlay, ugu cel celinaya walaalkiis oo bilo jira, “Waynu ka gudbaynaa dhibka” oo wakhtigaa farta laysugu fiiqay.
Tilmaamayaal Adan, Dhaqanka Somalida, Dirie, gabay, Heesta maqasha, hidiyo dhaqan, jiifto, Maanso, Somali
Sheeko: Jacayl Wehel Waayay.
Nofeembar 22, 2012 //
Maalin maal maha ka mida ayaa waxaa dhacday, in wiil arday ah oo iskuul (school) u sii jarmaadsani, uu xaafad qol qolkeed ama dayrkeeda hore ku arkay inan markaa aad qurux deedu u cajab galisay. Wuxuu is waydiiyay waa maxay inantan anad horay meesha ugu arki jirine? Iyo war inantu qurux badnaydee oo uu isagu iskula sii shawrayay intii uu ku sii socday iskuulka. Dheeho inta ka hartay qormadaan →
Tilmaamayaal Adan, Dirie, jacayl wehel waayay, Jaqle, sheeko, sheeko gaaban, sheeko somali, Somali